युएईमा अपलत्र यी ४ नेपाली भन्छन् – यस्तो दशैं हामीलाई नआओस् | Ratopati
personबिनोद श्रेष्ठ exploreकाठमाडौं access_timeअसोज १९, २०७६ chat_bubble_outline0
युएई –दसैँ मुखैमा छ, विदेसिएका नेपालीहरू दसैँ मनाउन धमाधम नेपाल फर्कँदै छन्। परिवार आफन्तहरूसँगको भेटघाट अनि पर्वमा रमाइलो गर्नै विदेसिएका नेपालीहरूको मुख्य उद्देश्यनै हो। यस्तो चाडवाडमा विदेसिएका नेपालीहरू आफ्नो देश फर्कन नपाउँदा कस्तो होला?
उनीहरूको बिगत ४ महिना देखि कामदार भिषा सकिएको छ, कम्पनीले काम दिएको छैन। ७ महिना देखि तलब नदिएकोले दसैँको मुखमा खान समेत समस्या परेको उनीहरू बताउँछन्। 'हामीलाई दसैँ तिहार त के, एक छाक रोटी खान समेत समस्या भएको छ। घर जान्छु भन्दापनि कम्पनीले कुनै रेस्पोन्स गर्दैन। जब पैसा हुन्छ,अनि मात्र घर पठाउने रे, हामी के गराैं?' पीडित बहादुर सिंह खत्री बताउँछन्। तलब नदिएकोले पसलबाट उदारो लिएका छाैं।
समस्याको बारेमा नेपाली दूतावासमा जानकारी गराइएको इनास युएईका अध्यक्ष राम तामाङले बताए। पीडितहरू निकै समस्यामा परेका रहेछन्। उनले रातोपाटीसँग भने, केही दिनको लागि वीरेन्द्र बराइली लगायत अन्य केही साथी मिलेर खाद्यान्न सहयोग गरेका छाैं।' यता एनआरएनए अलऐनले पनि पीडितहरूलाई सहयोग गर्ने प्रतिबद्बता जनाएको छ।
उक्त कम्पनीमा ४ नेपाली सहित २ दर्जन भन्दा बढी कामदारहरू बिचल्लीमा परेको जनाइएको छ।